Shaarkii Qadaafi iyo faraantigiisa oo lagu iibinayo labo malyuun oo doolar. - iftineducation.com
Shaarkii Qadaafi iyo faraantigiisa oo lagu iibinayo labo malyuun oo doolar.
iftineducation.com – Faraantiga iyo shaarkii uu gashanaa hogaamiyihii hore ee Libya Colenel Qaddafi markii ay dileen mucaaradka bishii Oktoober ayaa la sheegay in lagu iibinayo lacag badan oo gaaraysa illaa iyo labo malyan oo doolar.
Hogaamiyihii hore ee Libya ayaa xirnaa faraanti naxaas ah markii laga soo dhex bixiyey gododka wasaqda qaado magaalada Sirte ee ah magaalada uu ku dhashay Qaddafi kahor inta aan la toogan oo uusan dhiman.
Axmed Warfali oo ah nin u dhashay dalka Libya ayaa sheegay in uu ku doonayo lacag dhan labo malyan oo doolar kadib markii ay gacantiisa soo gashay labadan shey ee ah faraanti iyo shaarkiisa dhiigga leh.
Axmed ayaa aaminsan in haddii uu alaabtan geysan lahaa wadamada ku yaal Yurub uu ku heli lahaa lacag badan.
Sawir u eg kan Qaddafi ayaa la soo geliyey websiteka lagu magacaabo ArabsToday.net waxaana ka muuqda taariiqda uu guursaday xaaskiisa Safia bishii September tobankeeda 1970 sida lagu soo daabacay ABC News.
Hase yeeshee dadka ka soo horjeeda arrintan lagu iibinayo shaatiga iyo faraantigii Qaddafi ayaa waxa ay ku doodayaan in faraantigan uu yahay hanti ay leedahay dadka reer Libya.
Dalka Libya ayaa la rumeysan yahay in hanta badan ay qoyska Qaddafi ka dhaceen dalka Libya. Waxaana hantida qoyska Qaddafi la sheegay in badankood ay ka tageen balse inbadan ay dalal ku yaal caaalamka ay ku keydsadeen.